Ixabiso lesidibanisi xa kuthelekiswa nefuthe | Martech Zone
Ixabiso lesidibanisi xa kuthelekiswa nefuthe
NgoLwesihlanu, Julayi 12, 2019 NgoLwesihlanu, Julayi 12, 2019 Douglas Karr
Siyaqhubeka nokusokola ngaphakathi kushishino olunefuthe ngeemetriki ezingento kunye namanani aphezulu. Ndiligxekile ishishini ukusukela oko laqalwa kumajelo eendaba ezentlalo uninzi lweemetrikhi kunye neqonga alilinganisi mpe mbelelo, Balinganisa nje ubungakanani benethiwekhi, abaphulaphuli, okanye uluntu.
Mna ngokobuqu ndinenethiwekhi enkulu kakhulu… kangangokuba ihlala ingalawuleki kwaye ndinexesha elinzima lokukhuthaza unxibelelwano oluhle nabantu abaninzi endibahloniphayo. Ixesha elingaphezulu, abantu kunye neenkampani zihlala zithatha ukungena ngaphakathi nangaphandle kwengqwalaselo njengoko sijonga ingqalelo yethu kwishishini esikuyo. Ngamanye amaxesha siphinda sixhume ngenjongo njengoko ndibakhangela njengesixhobo esithembakeleyo ngesihloko endiswele ubuchule kuso. Ngamanye amaxesha, ndinokubakho nje kwinkomfa okanye kumsitho kwaye kwenzeka ukuba babekho kwaye sibuphembelela kwakhona ubudlelwane bethu.
Ngaphakathi kwenethiwekhi yam, ngamanye amaxesha mpe mbelelo izigqibo zokuthenga kubantu abathile abadibanisa okanye abandilandelayo… kodwa elo nani liphantsi kakhulu. Ndineqaqobana labathengi abandithemba ngokungagungqiyo kwaye ndingade ndibenzele isigqibo. Ndinabanye abantu kwinethiwekhi yam abaye bafikelela kwaye bathi ndincedisile ukuya phambili ngeqonga kunye nesicwangciso ngaphandle kokuzibandakanya buqu. Kwaye emva koko, ndinabo abalaleli endibaphembeleleyo kodwa ndingabelananga esidlangalaleni kwaye andiyazi impembelelo yabo iyonke. Ndihlala ndisiva kwizisombululo endizibhalileyo malunga nokuba ngubani na ondibongileyo kwaye wathi oko kukhokelele kulwakhiwo lokwazisa okanye umthengi omkhulu. Ukuba khange bandixelele, ngokunyanisekileyo ngekhe ndazi ngayo, nangona kunjalo.
Rhoqo kunokuchaphazela isigqibo sokuthenga, mna xhuma abantu kwinethiwekhi yam nabantu be mpe mbelelo. Izolo, umzekelo, ndidibene neqonga endinxibelelana nalo nefuthe kushishino lokuthengisa. Ndiyathenjwa bobabini ngabaphembeleli kwaye ndiyazithemba eqongeni, ke lunxibelelwano olukhulu lokwenza. Ndiqinisekile ukuba izakukhokelela kulwakhiwo lolwazi kunye nengeniso eyongezelelweyo.
Ke, ngaba ndinempembelelo okanye sisidibanisi? Ngelixa bendinefuthe ezinye izigqibo zokuthenga, ndiyakholelwa ukuba ndingaphezulu kwe umxhasi. Ndiyawazi amaqonga, ndiyabazi abantu, ndiyaziqonda iinkqubo… ke ndiyakwazi ukudibanisa amathemba afanelekileyo kubantu abafanelekileyo ukubanceda bathathe isigqibo sokuthenga.
Ingxaki yile, ewe, kukuba akukho nto ibambekayo inokubakho kulwazi lweedatha okanye kulo naliphi na iqonga elinempembelelo. Ndiyazi ukuba ixabiso lam libalulekile-unxibelelwano endilwenzileyo lubangele ukufunyanwa ngokuthe ngqo kwenkampani. Ndikhe ndabandakanyeka ngaphezulu kweebhiliyoni zeedola zotyalo-mali kunye nokufunyanwa kolu shishino lweMartech. Ndikwancede uninzi lwabaxumi ngokukhetha kwabo abathengisi… nefuthe kumakhulu ezigidi zeedola kwingeniso ethe ngqo.
Anditsho ukuba ndiqhayise… ndihlala ndingomnye wabantu kula maqela anceda ukuqhuba isigqibo sokuthenga. Kudala ndiyenza le nto kumashumi ambalwa eminyaka kwaye bendijikeleze ibhloko amaxesha ambalwa kwaye ndiyayazi into endiyenzayo. Ndingumdibanisi omkhulu.
Izihlanganisi xa kuthelekiswa neempembelelo
Makhe ndifike kwinqanaba. Siphambanisa ngokupheleleyo impembelelo nokunxibelelana kwaye iphakamisa imiceli mngeni emibini eyahlukileyo:
Iimpembelelo ngamanye amaxesha zizihlanganisi zokwenyani -Kukho iinkampani ezifuna abantu abanjengam abanoluvo olubalulekileyo kwishishini okanye kwingingqi. Ngamanye amaxesha iyimpembelelo, ngamanye amaxesha ibonwa njengempembelelo encinci (ukuba amanani mancinci kwaye isihloko sisihloko). Kodwa mhlawumbi abachaphazeli isigqibo sokuthenga… basisihlanganisi nje esimangalisayo. Iinkampani zihlala ziphoxekile kolu tyalo mali… kuba zingenakho ukuvelisa iziphumo zengeniso ethe ngqo ebilindelwe.
Izihlanganisi zinexabiso elimangalisayo ngokunjalo -Kukho abantu abanonxibelelwano olukhulu kwi-intanethi olunobutyebi obumangalisayo bokunceda ukudibanisa amachaphaza - ukusuka kubatyali mali, amaqonga, abathengi - kodwa akukho ndlela incinci yokubonisa naliphi na ixabiso kolo nxibelelwano. Ukuba, umzekelo, ndazisa inkampani yakho kummeli kwaye utyalomali kolo lwalamano… olunokukhokelela kuphuhliso olukhuselekileyo… kwaye nayiphi na ingeniso iya kuthi (ngokufanelekileyo) ibangelwe nguloo mphembeleli. Nangona kunjalo, ngaphandle koqhagamshelo ngekhe kwenzeke.
Njengomntu owenza ishishini lam ngaphandle kolwazi lweshishini lam kwaye wenze utyalomali olubonakalayo kuthungelwano lwam, ndiyasokola ekwenzeni imali ngokupheleleyo amandla endinawo. Uyenza njani imali ukuba ube ngu umxhasi? Abanye babathengi bam baliqonda ixabiso emva kokuba sinobudlelwane obude kunye kwaye bafumene iziphumo ezisezantsi.
Amaqonga amaninzi asondela kum ekhangela iziphumo ezikhawulezileyo. Ndibeke ulindelo ngeyona nto ibhetele ndinokuthi ukuthengisa imveliso okanye inkonzo yabo ayisiyiyo eyona nto ibaluleke kakhulu endiyizisayo… kwaye bahlala beyeka ukwenza naluphi na uthethathethwano nam. Ukubona okusemandleni, kuyadanisa… kodwa ndiyaluqonda uxinzelelo abaphantsi kwalo kunye nobunzima bokubonisa ixabiso kulwalamano.
Xa ubona amanani amakhulu, Ungahendeka ukuba uqeshe umntu oneenombolo njenge nefuthe. Gcina nje ukhumbula ukuba ixabiso eliveliswa ngala manani makhulu alinakuphela ekuthengiseni iimveliso okanye iinkonzo zakho… isenokuba kukudibanisa abakulethela kona.
tags: izihlanganisiBuyela kwimpembeleloinethiwekhi yokuncokola
Douglas Karr Friday, July 12, 2019 Friday, July 12, 2019
Umncedisi weVenkile yokuThengisa: Uphuhliso oluLandelayo olukhulu kwi-ECommerce?
Ukubonakaliswa akufani neMpembelelo: Lixesha lokuba uyeke ukusebenzisa uluvo lokulinganisa ixabiso